Ahoana no hitondranao ny abscess marary amin'ny lasely? - Lasely Bisikileta
Tena > Lasely Bisikileta > Aretin-koditra malemy - vahaolana maharitra
Ahoana no hitondranao ny abscess marary amin'ny lasely?
Ny fanasitranana dia azo afainganana amin'ny alàlan'ny fanosotra crème mony mirefarefa amin'ny counter amin'ny benzoyl peroxide na asidra salicylic, ary alemana amin'ny faritra misy compresse mafana. Tsara ihany koa ny manaisotra vonjimaika ireo lafin-javatra roa mitondra ny anjara birikinyaretin-koditrahatsembohana sy fifandirana amin'ny fijanonana amin'ny bisikileta mandra-pivoahan'ny toe-javatra.
Ka izao no tadiavina rehefa manova lasely. Amin'ny alàlan'ny fampidinana ny haavon'ny lasely, dia nenjehin'ny moose sy trozona ary orsa foana ianao tamin'ny farany. Hey zazalahy.
Rahampitso, Trainiacs. Izaho sy ny alika dia handeha mitaingina bisikileta miaraka amin'i Zwift ao anaty mpampiofana ary tonga ny fotoana nanandramako ireo lasely Cobb ireo. Ary izao dia hasehoko anao ny fomba fanovana lasely ary ho azonao antoka fa manana ny fandrefesana vakiana ianao ary amin'ny ankapobeny dia miorina ianao mba hahatongavana amin'ny teboka fanombohana izay tsy manana olana lehibe momba ny fanaintainan'ny lasely, izany hoe ny fanaintainana. vodin-kazo.
Hitondra anao any amin'ny valan-javaboary fampiononana izany. Ity no zavatra tadiavina rehefa manova lasely. Zahao ity lasely Physique ity izay mifanaraka amin'ny bisikileta.
Ampitahao amin'ity lasely Cobb ity, misy fahasamihafana lehibe vitsivitsy. Laharana voalohany, somary hafa kely ny sakany. Heveriko fa somary malalaka kokoa ity iray ity.
Laharana faharoa, ny lalamby dia al. somary lavalava kokoa ary horesahintsika ny antony mahatonga izany. Ka amin'ny farany dia lasely lava sy lava kokoa izy io, ary mety ho lava kokoa aza.
Ary midika izany fa namakivaky ilay fanamoriana lasely iray manontolo izahay, ny rafitra faneriterena faneriterena tao amin'ny Alter Ego Sports, hahazoana antoka fa voantso an'io antso io aho, saingy tiako apetraka amin'ny toerana iray ihany io. Somary manahirana kokoa noho ny miteny fotsiny hoe: 'Eny, hamaha ny visy aho, esory io ary averiko indray. 'Satria, araka ny hitanao, hafa ny firafitra.
Noho izany maka refy roa ianao alohan'ny hanesorana ilay lasely voalohany. Laharana voalohany. Tiako ny mampiasa ny cap cap satria na dia mihodina kely aza ny baoritra ary somary miala ianao dia mbola manosika ilay toerana mitovy ihany ianao satria mihodina amin'ny toerana iray ihany.
Avy eo, refesina hatrany amin'ny orona aloha amin'ny lasely ny sisiny mankany amin'ny farany ambany amin'ny tadin'ny pedal ary miakatra, fa tsy ny ambanin'ny lasely satria mety miova ny satroka amin'ny hatevin'ny lasely, fa refesinao hatramin'ny tampon'ny Alohan'ny lasely. Ka raha ny tena izy dia eo no eo, rehefa manomboka miakatra izy ary avy eo manandrana manitsy izany amin'ny alàlan'ny fandehanana mandroso sy miakatra sy miakatra sy midina amin'ny fipetrahan'ny seza, aleo atao izao, ka ny tokony hataonao dia ny tokony hivoaranao etsy sy eroa kely, raha ny amiko dia nataoko aloha ny tratra ary avy eo ny haavon'ny lasely avy eo. Ny famoahana ny haavon'ny lasely dia nampivily ny fanatrarana azy, noho izany dia mila karazana tsy maintsy hamelana ny zava-drehetra ianao, ka izany no mahatonga ahy manana ny tafio-drivotra.
Hamarino tsara fa mampiasa herinaratra torsiaka sy tafio-drivotra ianao mba hahazoana antoka fa tsy tery loatra sy cranking ianao. Cranks? Oh. Rehefa vaky ny karbaona dia avelao ho afaka kely fotsiny ny tsirairay, alao antoka fa marina ny fandrefesana ary avy eo, raha manao izany tsara ianao dia aza ariana ilay iray hafa.
Ka eo no tokony hitresaka, azoko atao izao ny mitafy roa. Ary ankehitriny omeo ora iray sy Zwiftand kely aho, holazaiko anao ny fomba itiavako ity lasely Cobb ity. (Hira mahafinaritra) Tianao handeha ve aho? - Eny, azafady. - Veloma. - veloma, tompoko. - Ny fatiantoka ny mpanazatra marani-tsaina, raha te hanao an'ity Zwift rehetra ity isika ary manana mpitaingina wahoo dia tokony hamindra fo amin'ny zavatra hafa rehetra amin'ny fiainantsika toy ny serivisy amin'ny Internet.
Vao avy niasa tamin'ny hatsembohana aho, heveriko fa nitaingina bisikileta nandritra ny 20 minitra ary angamba mbola manam-potoana hamita ity asa ity aho, fiara fitaterana 25 minitra, antso an-tariby roa ary mbola tsy misy Internet sy bluetooth miasa any aoriana, tsy izany aho. mitaingina, tsy manam-potoana aho. Raha teo antenatenan'ny vanim-potoana io dia ho sosotra i Taren. Lazaiko aminao, ao anatin'ny 25 minitra nitaingenako ary 30 minitra taty aoriana tamin'ny finday niaraka tamin'ny orinasan-tserasera dia afaka milaza aminao aho fa tsy ratsy ny lasely Cobb Ny Cobb- Saddle mipetraka somary ambony kokoa noho ny Physique.
Ny lalamben'ilay lasely Physique dia tsy dia avo loatra tahaka ny lalamby eo amin'ny lasely Cobb eto ary inona? Nilaza i John Cobb fa tena nataony avo kokoa ireo lalamby ireo mba hitrangan'ny hatairana tampoka kely kokoa. Tsy toy izany koa ireo lasely roa ireo, fa nilaza kosa i John Cobb fa amin'ny antonony dia manandrana manao ny habaka ahafahanao mandroso sy miverina amin'ireto lalamby ireto izy ireo. Tiany ireo manana fanatanjahan-tena raha toa ka lavitra ny fivezivezin'izy ireo ny atleta, mba hampahazo aina azy amin'ny lafiny iray na hafa, avo kokoa ireo lalamby ireo mba hanarahan'izy ireo bebe kokoa sy lava kokoa ka ho mora kokoa ny manitsy azy ireo.
Avy eo manampy fito grama eo ho eo amin'ny lasely izy, saingy hoy izy: 'Fantatrao raha hanampy grama fito isika, fa mety hampahazo aina kokoa ny mpitaingina azy. 'Ity dia marimaritra iraisana hataony tontolo andro. Misy fantsona kely ao amin'ny lasely Physique eto, fa misy fantsona iray manontolo tapaka ao amin'ity lasely Cobb ity.
Toa ny zavatra nataon'i John Cobb rehefa nanomboka nanao lasely izy fa mahatoky izy ireo ankehitriny. Hanomboka amin'ny endrika lasely izy ireo ary rehefa mitaingina azy ireo ny mpitaingina azy ary manandrana azy dia manontany ny mpitaingina izy ireo hoe aiza ny teboka faneriterena ary aiza ny faritra misy olana ary aiza ireo faritra misy olana ireo, eo no manomboka ny volon-koditra. Ary ny zavatra azon'izy ireo dia toy ny lasely mafy satria afaka mitazona faritra olana maro araka izay azo atao izy ireo rehefa miharatra.
Somary lehibe noho io io lasely io, ka milanja kely kokoa. Ny soavaly Physique dia misongadina mandritra ny karazan'ilay sobika The Cobb miakatra ambony, eo amin'ny zoro avo kokoa izy io. Rehefa mametraka lasely ianao dia tianao ho avo lenta araka izay azo atao izany na hidina kely fotsiny.
bisikileta amin'ny halavan'ny fijanonana
Tsy te-hidina lavitra ianao satria hanomboka hikorisa ary hanao zava-dratsy amin'ny fitondra-tongotrao. Ka andao ary. Raha mila manova ny lasely ianao dia izay no azonao atao.
Raha te hampiasa ilay lasely mitovy ianao ary mila mamindra azy manodidina anao dia afaka maka marika maranitra ianao ary manisy marika ireo toerana eto ary amin'ny seza fipetrahana dia azonao atao ny manisy marika ny toerana tokony hisy azy, fa te hiara-hiova aminao koa ianao. raiso ireo fandrefesana ireo mba hahafahanao manakaiky farafaharatsiny amin'ilay teboka fantatrao fa mety. Kivy izao, hiala amin'ity bisikilety ity aho, hadino fotsiny izany, hohadinoiko izany ary handeha ho any amin'ny Peggy akupungturist aho. Hametaka zavatra vitsivitsy amin'ny voditongotra izy.
Eny ary, noho izany dia hanafotra anao zavatra eto aho. Laharana voalohany, ity no triathlon Taren HQ vaovao. Tsy mbola nizara fandrosoana taminareo aho nandritra ny fotoana kelikely satria misy ny tsy ampoizina ho anareo rehetra fa miandry ny hisehoany mandra-pahatanterak'izany tanteraka aho, milay be.
Fa eto, jereo ity. (mozika upbeat) Ary 270 metatra taty aoriana dia ao amin'ny acupuncturist aho. Tena ho tsara eto.
Ny tranon'i Coach Pat dia iray kilaometatra miala azy. Ny pisinina dia iray kilaometatra miala ny antsasak'adiny K amin'io lalana io. Triathlon Taren HQ dia manodidina ny dimy metatra miala ny diako lamosiko.
Raha mihetsika aho dia tsy maintsy mifindra any amin'ny toerana izay misy ny zava-drehetra ao anaty ala roa sy vy vy sivy. Fa angamba tsy tundra mangatsiaka. Fanjaitra amin'ny tongotra, mmmmmmmm.
Fa bandy henjana aho ka nahavita azy. Tsy mitanjaka eto koa aho, fa mendri-kaja. Ity dia Peggy mpikaroka akupunkurista. - Salama.- Mikarakara ahy izy ary manindrona fanjaitra ahy.- Ataoko (mihomehy). - Ary mihomehy.
Tsara, misaotra, Peggy. - Veloma, Taren. Mirary tontolo andro finaritra. - Ianao koa.
Izy no ofisialy indrindra amin'ny fomba ofisialy. Izy no tsara indrindra. Izy sy Kim dia nitondra fanomezana Krismasy tamin'ny taon-dasa.
Nomeny ahy ity triathlon kanadianina ity, zahao. Mihazakazaka, milomano, mananika, marina izany. Enjeho amin'ny moose sy trozona ary orsa foana ianao, izany no mahatonga anay ho henjana.
Izay no mahatonga anay milay be. Eny ary, izay ihany no natao androany. Misaotra anao Peggy akupungturist, ianao no tsara indrindra.
manasa vava sy manao fanatanjahan-tena
Tokony hasianao aretin-lasely ve?
Aza manandranatsapako,vaky, mamoritra na manakorontanaaretin-koditra- mitoera madio sy maina fotsiny ary avelao ny vatanao hanao ny ambiny.
♪ Bob sy Brad ♪♪ Ireo mpitsabo aretin-tsaina roa malaza ☆ ☆ ☆♪ Amin'ny Internet ♪ - Salama ry olona, ​​izaho Bob Schrupp, Physiotherapist - Brad Heineck, Physiotherapist - Miara-dia isika no mpahay fizika fanta-daza indrindra amin'ny Internet - Araka ny hevitray mazava ho azy, Bob .- Natolotro anao i Brad, hitanao io, mialoha azy aho.- Ah, manana ahy izy! 'Sahala amin'ny fanazaran-tena ity --- hiteny aho hoe mety manana drafitra tsara.
Eny, izany dia, io dia toy ny mitondra fiara any aoriany. (chuckles) - Androany dia miresaka momba ny tsotra izahay ary amin'izay dia azonao atao ny manala ny fanaintainan'ny lohalika, lamosina ary sciatic. - Marina izany, Bob. - Tena zava-dehibe amin'ny toerana marina. - Marina, betsaka ny olona manontany momba ny mitaingina bisikileta misy fanaintainan'ny sciatic ao aoriana ka andao omena ny valiny. - Okay.
Manana lahatsoratra momba ny fomba hijanonana ho salama, ho salama ary tsy hisy fanaintainana, ary mampakatra azy ireo isan'andro. Ianao koa te-handeha amin'ny tranokalanay bobandbrad.com.
Handeha ve isika? - Ie. - Eny, afaka mijanona tsy mandeha pedal isika mandritra ny fotoana fohy mba hahafahantsika miteny mahomby amin'ny mpihaino antsika. Ka ny olana lehibe amin'ny olana any aoriana, ny fanaintainan'ny lohalika mifandraika amin'ny bisikileta dia ny toe-tsaina.
Aiza? Ny fametahana ny seza ambony sy ambany dia tena zava-dehibe, mandroso sy miverina ny manaraka, ary avy eo ny haavon'ny anjavonao dia manakiana tanteraka ny fanesorana ny vodin-damosinao - ny ananantsika eto dia manana ambaratonga roa amin'ny bisikileta eto isika. Manana bisikileta mpampiofana izahay, mandeha tsara izy io, mazàna ireo olona tsy mpitaingina bisikileta matotra, tsy mahatratra kilometatra maro dia hanana mpampiofana. Tsy marina foana izany. - Izaho izany. - Ary bisikileta amin'ny hazakazaka izany.
Ho an'ny olona rehetra dia sarotra kokoa ny manangana mba hampihenana ny fihenan'ny lamosina ary hiresaka momba izany aho ao anatin'ny fotoana fohy, ho tonga izahay, ka raha vantany vao manana bisikileta mivory ho anao ianao dia maniry ny hamory azy tsara raha tsy izany dia hiantsoana azy olona avy any ivelany. - Tsy mahafatifaty ve izany? Ka amin'izao fotoana izao-- - Ary lazaiko aminao - Tsy manam-pahaizana momba an'io mihitsy aho, fa hitako hatrany izany ary heveriko fa mahalasa adala ahy izany, indrindra ny seza ambany loatra. - Marina, marina.
Oh, aza mandeha lavitra intsony .- Ataovy eo an-tendrombohitra ny kodia eo alohan'izay, ary ny tanjonao dia ny hampiakatra ny haavon'ny bisikiletanao mba hivoahan'ny famaky, ho tonga ara-teknika eto aho izao, fa raha tsy fantatrao, Raha ianao irery manana olona te hanana akanjo ankapobeny, raha tianao amin'ny ankapobeny, okay, manana izany isika eto. Jereo ny seza, raha mijery ny fipetrahan'i Bob ianao dia hitanao fa somary avo kokoa izy io.
Tsy misy ambaratonga izany ary nitaraina i Bob. Hoy izy: eny, tsy mahazo aina izany. Mahatsiaro ho voatosika hiverina foana izy ary tsy mahazo aina amin'izany perineum na prostate izany, ary mety hiteraka olana eo amin'io faritra io ary tsy tianao izany.- Marina izany .- Ka io seza io dia mila havalina, izay no tsy hanao izany isika izao, fa tanjona izany taty aoriana --- Tiako izany, Brad.
Ankasitrahako fa nanao ny fanitsiana teto ianao, noho izany - Ka amboary ny zava-drehetra, miditra ianao izao, Bob. Izahay izao dia nanangana azy mba hahafahan'i Bob mandaka. I Bob dia, antsoiko izy ireo hoe “mixeur”, antsoin'ny olona sasany hoe tranom-borona izy ireo rehefa tsy manana clip na pedal tsy misy tsindry ianao, fa handona ny latabatra indray mandeha isika, ary tsara izany resahina eto izany.
Eny, ry Bob, maninona ianao no tsy mandeha an-tongotra fotsiny fa hipetraka fotsiny. Ka apetraho ao anaty lasely ny fitenenan-tsainao mba hanenony na hahatsapa ho mahazo aina ianao, eo no mahazatra anao matetika? - Marina, marina - Okay. Amin'ny tontolon'ny bisikileta dia antsoina hoe lasely izy.
Rehefa miteny aho hoe mipetraka dia lazain'izy ireo izany hoe sit, tsy izany? - Marina, marina. - Na izany na tsy izany, andao hidina amin'ny toeran'ny 6:00 amin'io pedal io ianao, tadiavinao ity --- Handeha lavitra kokoa aho, sa tsy izany? - Marina. - Andao. - Ny famaky, azonao atsangana ny tongotrao? - Eny.- Ny axis an'ny pedal dia tokony hilahatra miaraka amin'ny phalanges-nao, eo indrindra, ireo lehibe, mandeha amin'ny tongotra aho.- Azo antoka.- Eo amin'ny toerana misy ny rantsan-tongotra no misy anao ireto, ireto dia ny toerana mety ho an'ny tongotra amin'ny pedal. 6:00 toerana, tongotra amin'ny haavon'ny gorodona, ka tsia, afaka mamoritra dorsa ve ianao, bob? Eny, ho ambany loatra izany, ary raha izany dia miakara eo na miondrika plantarly, andao halamina tsara ary avy eo jerentsika ny fihenan'ny lohalika.
Nandeha kilasy nampianarin'ny manam-pahaizana izao aho izao --- ao aorianao izany, Brad.- Napetrako tao izy io mba tsy hijereko - (nihomehy i Bob) Mpitsabo sy mpitsabo kinesiology ary maro izy ireo bisikileta nitaingina, nandinika tsara an'io h, izy ireo no olona matihanina indrindra sy olona manam-pahaizana indrindra teo an-kianja, ary nilaza izy ireo fa eo anelanelan'ny sivy sy 14 degre amin'ny lohalika no avo lenta. Raha mijery an'i Bob isika dia fantatro fa tsy manana goniometra ianao, saingy afaka mandalo tsy misy azy ianao, raha refesiko izy izao dia hanana 50 degre amin'ny lohalika - Wow - Mazava ho azy fa ambany loatra ilay seza.
Ity lohalika ity dia mahazo soritr'aretina be loatra rehefa mandeha ny fotoana, koa maninona ianao no tsy mifoha fotsiny Bob, tsara tarehy ity bisikileta ity satria mora ahitsy ny seza, hiakatra iray santimetatra sy sasany eo ho eo aho, mety tsara ho an'ny lahatsoratra iray. Matetika ianao dia tsy maintsy mivoaka wrench ary manao izany. Ankehitriny miverina miverina amin'ny pedal, Bob.
Mahatsiaro fahasamihafana lehibe ve ianao? - Oh yeah. - Ary tsy maintsy mahita anao mety ho avo loatra ianao. - Mety, toy ny efa ho tonga amin'ny farany aho - Andao, raha tsapanao izany, maninjitra ny tananao ianao, ary azo antoka fa avo loatra izany.
Tonga ianao ary miverina sy miverina ny raharaha, eny, ary eo ambanin'ny ambaratonga sivy ianao. Alefaso fotsiny ianao handao anao kely ary tsy handany fotoana bebe kokoa amin'izany intsony aho, fa izany no hevitra. OK.
Noho izany dia nahazo ny seza ianao tamin'izany fomba izany, nahazo ny hahavony ianao - - Izao dia tsapa - Toa tena akaiky izahay - Ary tsapa satria ambany loatra ny nitondra anao -. Marina.- Ary nahatsikaritra ny tsy fitovizany ianao. - Eny, eny. - Eny, izany.
Ary ny manaraka dia ny lamosina. Ahoana no tokony hitehirizantsika ny adin-tsaina any ambadika? Ankehitriny, ny masinina elliptika miaraka amin'ity karazana baoritra ity no mety ho scenario tsara indrindra hampihenana ny adin-damosina. Manana fanaintainana miverina na sciatica ianao, izay mitazona anao hitsangana, okay.- Eny, tsy te ho toy izany ianao.- Marina mihitsy.
Ka ny haavony dia azo ahitsy eto, azonao atao ny mamaha azy io, ary raha ny marina, raha lasa ambony kokoa izy io, dia tsy dia hihena ny fihenjanana ao an-damosiny, eny, tena hihalehibe araka izay azo atao.- Heveriko fa avo lenta araka ny azony .- Mety ho, tena tsara izany - ary manana mahafinaritra ianao, eny, satria azo apetraka eto ihany koa io, - Oh, izany no-- - Eo amin'ny hatoka-- - Tsy nazava tamiko izany. - Manana fanovana roa samy hafa ianao, marina.
Saingy avo lenta araka izay tratranao ihany koa ianao. Mety hiakatra ambony angamba izy io. Raha mpitaingina bisikileta matotra ianao dia mieritreritra ny hafainganana ary tsy mila mijaly miverina ny lamosinao, tsy mety izy ireo. - Marina.- Satria toy ny lay ianao, dia ho tratranao ny rivotra, hampiadana anao izany , fa izany no tsy maintsy sorona ho an'ny lamosinao. - Marina, ary ny hany ahiako dia ny fitazomana ny fahasalamako any aoriana y.- Izany no toetrako.
Fantatro fa miaraka amin'ny bisikiletako eto izao fa mitaingina bisikileta amin'ny hazakazaka aho, manahirana kokoa ny lamosiko. Raha mijery akaiky ianao eto dia nisy mekaniko nanao fanamarinana fanampiny sy antsasaky ny avo kokoa noho ny mahazatra dia mampihena ahy, fa na izany aza, izany no fomba fiasako miaraka aminy. Ary amin'ny fotoana sasany dia mety ho lasa ambony kokoa aho na mahazo milina elliptical, miankina amin'ny fahatsapana ny lamosiko rehefa miditra amin'ny 80s sy 90s aho. (Hehy) Manantena aho izao! - Atta zazalahy, sakaiza! Tiako ity! - Ka manalavitra, Bob.
Miala, tsara. Ka natsangana ny bisikiletan'i Bob ary avy eo handeha hijery zavatra hafa indray aho momba ny fanaintainan'ny lamosina sy ny fampiononana ankapobeny amin'ny bisikileta. Raha manana bisikileta an-dàlana ianao, okay, manana aerobars aho satria manao triathlons ary tiako koa izany.
Rehefa azonao izany dia reraka ny rantsan-tànanao ary eo am-pito na zavatra ao anaty kapaoty ianao, na eto ianao ary matetika ny tanako ankavanana dia manomboka tsy miasa. io nerveuse medial io, ka miditra amin'io toerana io aho ary mitazona azy eo. Somary somary mihamafy eo an-damosiko io, fa manaisotra ny hakamoana eny an-tanako.
Satria mandanjalanja ny lamosiko aho dia eo an-tendron'ny rantsan-tànako, noho izany --- Eny, marina izany - toy izany aho ary ianao izao dia manondro fa tena tsy mahazo aina ity! - Ie! Hifarana amin'ny olana prostaty ianao. Raha tsy tianao-- - Ie, hihira soprano eto aho - Ka na izany aza, heveriko fa voasarona daholo isika, Bob - Ie, tsara dia tsara. - Tsara be ny zava-drehetra, ka alaharo tsara araka ny tokony ho izy ny bisikiletanao, aza mandeha tsy mendrika ary mankafy ny toetr'andro Hanamboarako ny bisikiletako, ho tsara toerana aho - Eny, mila veloma isika izao - Eny, adios! - Afaka miloka amin'izany ianao.
Mety ho voan'ny virus ny fery?
Chafing amalahelo amin'ny laselymety hivoatra rehefa voakorontana ny hoditra noho ny fikororohana vokatry ny hery mihetsiketsika eo amin'ny vatana sy ny akanjo. Raha mafy ny fisotronana dia mety ho tapaka ny hoditra arylasafery (sary 1) ary amin'ny tranga sasany dia metynifindran'ny aretinaary fenoy pus izay antsoina hoe abscess (sary 2).
Fanaintainana amin'ny lasely. Oh, heveriko fa ny sasany aminareo dia mety ho nibolisatra nandre ireo teny ireo fotsiny. Fa raha mbola tsy nandia iray ianao talohan'ny mety ho somary gaga amin'ny fitarainana henonao amin'ny triathletes sy bisikileta - eny indrisy fa efa niaina mpivady aho nandritra ny taona maro.
Ary afaka mifidy ny tsy fahasalaman'izy ireo aho. Raha ny marina, ny ampahany sasany amin'ny anatomiko dia toa manandrana mandeha amin'ny toerana azo antoka. Aza matahotra anefa, tsy voatery ho anisan'ny bisikileta ianao.
Ary betsaka ny zavatra azonao atao hisorohana azy ireo ary hahatonga ny bisikileta sy ny triathlon ho mahafinaritra kokoa. Izany no antony niarahanay nanolotra torohevitra vitsivitsy hanampiana anao hisoroka ny ratra amin'ny lasely. mozika (mierona mafy) mozika) - Voalohany, inona ny ratra amin'ny lasely? Raha tsorina, tsotra izao, dia mahasosotra ny hoditra amin'izay ifandraisany amin'ilay lasely.
Ny fitombenanao. Ary minoa ahy, dia ho fantatrao rehefa manana izany ianao. - Eny, tsy mitovy amin'ny fikororohana izy ireo, ny fikosehana ny hoditra miverimberina mitondra takaitra sy vay ka miteraka volo maniry na aretin-koditry ny bakteria.
Tsy misy tsara tarehy na iray aza. Noho izany, andao jerena ny fomba hitazomana izany. (mozika falifaly) Eny, satria ny anjelinao dia iray amin'ireo hevi-dehibe ifandraisana amin'ny bisikiletanao, ary mitaky ny ankamaroan'ny lanjany, mendrika ny hampiasa vola amin'ny pataloha fohy misy bisikileta miaraka amina padding.
Antsointsika hoe sezivezin'ny seza io. Ary mpamonjy aina. Amin'ny ankapobeny, arakaraka ny hamaron'ny vidin'ny short, no mahatsara kokoa ny fipetrahana ao anatiny.
Fa ny tena zava-dehibe dia ny manamarina raha mipetraka tsara izy ireo. Satria io no hampisy fahasamihafana lehibe indrindra. (Hira mahafinaritra) - Ary toy izany koa ny fiakanjoantsika tri, ny ankamaroany dia hanana pad pad.
Raha ny tena izy dia ampirisihiko foana ny mitafy ilay palitao tri miaraka amina seza, fa tsy mitovy amin'ny an'ny bisikileta bisikiletanay izany, koa raha handeha hanao triathlon mitafy bisikileta bisikilety ianao dia mety handona ny antsasaky ny farihy ity ary tsy mahazo aina izany mandehana miditra. Ka manify kely izy ireo, kely kely kokoa izy ireo, saingy miovaova ihany koa izany. Ka hojereko ny halavan'ny triathlon andraisanao anjara sy ny halavan'ny bisikileta ho toy ny lamban'ny tri-suit anao, ny pataloha bisikileta no mety.
Satria raha solafaka ny ranjony ka mahazo fitaovana mifatotra ianao, dia mety hiteraka fikapohana sy fery amin'ny lasely koa izany. (Joy Music) - Ny iray amin'ireo faritra miharihary indrindra dia ny lasely, nefa io koa dia iray amin'ireo sarotra indrindra ahitanao ny marina. Samy manana ny endriny ny tsirairay amintsika, ka tsy misy lasely mifanentana amin'ny rehetra.
Noho izany dia tsy maintsy manam-paharetana ianao amin'ny fanandramana hahitana ny mety aminao, fa, amin'ny lafiny tsara, misy faritra maro hisafidianana ka ho hitanao ny mety aminy. Tsara ihany koa ny manamarika fa tsy voatery hoe momba ny lasely lehibe kokoa sy feno padded kokoa ahazoana aina kokoa, fa ny endrika. Ny lasely sasany aza dia tonga miaraka amin'ny faritra voapaika, izay malaza indrindra amin'ny vehivavy maro. (mozika mihetsiketsika) - Ary avy eo mitondra cramois cramois izahay - mianadahy bisikileta sasany manao fianianana tanteraka amin'izany.
Raha izaho manokana dia mieritreritra aho fa tsy tokony tena mila ilay lasely mety sy mety, mety tsara fa mety tsara nefa tena malaza be. Mamono ireo bakteria mety hitarika aretin-koditra izy io, ary izy io koa dia miasa ho toy ny menaka manitra eo anelanelan'ny hoditrao sy ny pataloha kelinao; apetaho eo amin'ny hoditrao fotsiny io, na, raha tsy izany, amin'ny takelaka fehin-kalonao fohy. Aza asiana be loatra satria mety hiasa amin'ny lalana mifanohitra aminy ary ataovy toy ny nahitana lozam-pifamoivoizana nampalahelo koa ianao.
Ary hiteny aho amin'ny triathlon, fa azo kosasana izany rehefa milomano, raha ny marina, ny kinova manokana misy ny triathlon, na, toa ireo atleta sy matihanina maro, dia afaka mampiasa jelly solika fotsiny. (mozika amponga faly) Eny ary, avy nitaingina bisikilety mega ianao mody. Ny mipetraka fotsiny dia miala sasatra ary miala sasatra.
Ary mety mihinana helo be dia be ianao. Fa raha tena manana ny c ianao Raha manana lasely maharary dia atoro anao ny hialanao haingana amin'ny bisikiletanao bisikileta. Ary ny tsara indrindra dia mitsambikina ao anaty fandroana raha afaka.
mamorona làlan'ny bisikileta
Tena miharihary izany, fa izany rehetra izany dia manampy amin'ny fanesorana ireo bakteria ratsy ao amin'io faritra io. (mozika mihomehy) Okay, tena tsotra. Diovy ny bisikiletanao bisikileta.
Ho anao sy ny sakaizanao. Tena tsy soso-kevitra mihitsy aho ny hitafy ny bisikiletanao bisikileta imbetsaka raha tsy manasa azy ireo noho ny antony bakteria toy ny teo aloha. Ary koa, hahazoana antoka fa voadio tanteraka izy ireo amin'ny faran'ny tsingerina fanasan-damba satria ny detertaire dia mety hahasosotra kely. (mozika amponga elektronika mafy) - Eny, raha manana fanaintainana amin'ny lasely ianao na mitaingina triathlon, mandehana haingana kokoa.
Mety tsy ho toy ny intuitive io, fa raha mandeha mafy kokoa ianao ary mandeha tongotra somary mafy kokoa, dia hiala kely eo amin'ny lasely ianao, mazava ho azy, izay antenaina fa hanaisotra ny fanaintainana amin'ny lasely ary antenaina izany dia hanome anao toerana miaina. (mozika rock mafy) - Okay, fanesorana volo. Na ny famolahana, ny fiharatana, na ny fomba hafa, dia mety hialanao ny volon-koditra akaiky kokoa manodidina ny volonao amin'ny faritra misy anao ary amin'ny faritra izay mitaky tsindry sy fikorontanana kely, dia mety hidika izany hoe volo miditra ary mety misy aretina mihitsy aza.
Amin'izao fotoana izao dia miresaka amin'ny lehilahy indrindra aho. Faly aho fa tsy afaka milaza amin'ny vehivavy ny zavatra tokony hatao. Mety ho somary marokoroko izy io, fa ny volo amin'ity karazana faritra ity dia tena manampy amin'ny fitaterana sy ny fipoahan'ny hatsembohana amin'ny hoditra. (Mozika rock mahery) - Ny lasely izay avo loatra, miolakolaka na mitongilana dia mety hiteraka korontana.
Ary araka ny voalaza tetsy aloha, ny lasely dia iray amin'ireo teboka telo mifandray amin'ny bisikileta. Ary mampiasa ny ankamaroan'ny lanjan'ny vatanao izy io. Ka ilaina ny maka antoka fa napetraka tsara ho anao izy io.
Fa raha manana fanaintainana amin'ny lasely matetika ianao, dia mety ny mahazo bisikileta, indrindra raha mitaingina triathlons na TGs ianao. (Mozika rock mahery) - Farany nefa tsy azo odiantsy, ny kilaoty fohy amin'ny bisikileta dia natao hitafy ny hoditra; Mety ho zatra manao atin'akanjo isan'andro izy ireo, fa raha resaka bisikileta sy triathlon dia avelao any an-trano. Ny mitazona azy eo ambanin'ny bisikiletanao bisikileta na ny akanjonao triathlon dia miteraka tsy fahazoana aina na ratra amin'ny lasely mihitsy aza.
Raha izao, raha efa namorona aretin-lasely ianao dia mandefa ny fangorahan'izy ireo ny GTM. Ahenao fotsiny ny fampihetseham-batana amin'ny bisikileta na avelao tanteraka mandra-pialan'ny soritr'aretinao. Ary araho ireto torohevitra ireto avy eo. - Eny, ary rehefa mbola tsy nanao ianao ary te hahita lahatsoratra GTM misimisy kokoa, tsindrio fotsiny ny tany hahafahana misoratra anarana.
Ary raha te hahita ny zavatra azontsika ianarana triathletes ianarana amin'ny bisikileta an-dalambe ianao dia tsindrio eto. Raha tianao ny lahatsoratray bibikely triathlon ho an'ny vao kitiho eto.
Mangotraka ve ny ferin'ny lasely?
Ny ankamaroan'ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia milaza izanyaretin-koditradia marinavayateraky ny bakteria amin'ny hoditra izay manafika ny fivontosan'ny tany.
Miala ve ny fanaintainana amin'ny lasely?
Raha tratranao aloha izy ireo dia mazànaandehana mandeharehefa afaka andro vitsivitsy miala ny bisikileta, fa lalina kokoaferinymety maharitra herinandro vitsivitsy, hoy izy. Manantona dokotera raha hitanao fa miverina matetika izy ireo; maharitra roa herinandro mahery; na raha manana ianaofanaintainanamihombo be izany, tazo sy marokoroko mena eo amin'ilay toerana.17. 2018.
Ahoana no fanalana ny vongan-fanaintainana?
CHAMOIS CREAM: ny bisikileta namana akaiky indrindra dia kremazy chamois tsara. Izany dia hampihena ny fifandirana eo amin'ny hoditrao sy ny pataloha kelinao. Tsy izany ihany, fa menaka maroeFAfananana manohitra ny septika sy anti-milaza zavatra mampihena ny bakteria amin'ny fananganana sy fahasosorana.25.10.2016
Manao ahoana ny fery amin'ny lasely?
feryny ankamaroanyhitamanodidina ny feny anatiny ambony indrindra, ny taint, ary ilay tampon'ny tetezamita izay lasa ambany ny tongotra. Azon'izy ireo atao ny mivaingana toy ny vongan-doha maratra mafy, kista feno tsiranoka na moka mihitsy aza, kelytoy nymirehitra Ny endrika mahazatra indrindra amalahelo amin'ny laselydia oharina amin'ny folikan'ny volo voan'ny aretina.
Fa maninona aho no mahazo valan'ady?
Izy ireo dia mitranga vokatry ny hamandoana, ny tsindry ary ny fifanenjanana izay ipetrahan'ny atleta eo amin'ny sezan'ny bisikileta (lasely).Fery amin'ny laselydia heverina fa hivoatra rehefa mandeha ny fotoana, manomboka amin'ny fikororohana tsotra ny hoditra amin'ny vodin-tany, ny faritra misy ny taovam-pananahana ary ny feny anatiny.
Fa maninona no marary mafy ny alaheloko rehefa avy bisikileta?
Ara-dalàna izany ho anaovodymahatsapa kelymarary aorian'nymitaingina, satria rehefa mipetraka amin'ny abisikiletaseza, ny ankamaroan'ny lanjanao dia zaraina amin'ny taolana roa tena kely eo ambanin'ny valahanao. Mety hitarika amin'nyfanaintainana, indrindra raha mandeha lavitra ianao, hoy ny fanazavan'i Maddy Ciccone, mpampianatra SoulCycle any Boston.14 2018.
Inona no mahatonga ny ratra amin'ny sisin'ny lasely?
Na izany aza, ny famaritana ankapobeny dia aretina sy alaina hoditra matetika ao amin'ilay faritra izay mifandray tsy tapaka amin'ilay lasely. Ny fery amin'ny lasely dia mitovy be amin'ny tasy ary matetika ireo dia vokatry ny folikelin'ny volo. Ireo ratra toa ny vay dia matetika no lehibe kokoa ary mety hanaintaina kokoa.
Ahoana ny fanalana ny karazana vongan-kesika mafy amin'ny Saddle Sore?
Ny fampindrana izany dia mety hiteraka areti-mifindra ary tsy mahatsikaiky, tsy mampihomehy mihintsy. Ny fanampiana andro vitsivitsy miala eo amin'ny lasely dia mety hanampy, manamboatra fandroana mahafinaritra ihany koa (miaraka amin'ny sira Epsom raha azonao atao). Ny fampiharana hafanana (pad, compresse mafana) dia manampy ihany koa.
Inona no hatao raha manana abscess amin'ny tongotrao ianao?
Raha vantany vao madio ny volo misy anao dia apetraho malalaka ny lamba gazy na bandy eo amboniny. Mba hisorohana ny aretina dia ovao ny bandy raha toa ka mandeha ao aminy ilay abscess na raha mando na maloto ilay fonony. Azonao atao koa ny manisy tantely Manuka amin'ny vavoninao amin'ny lamba landihazo alohan'ny handrakofana azy mba hisorohana ny aretina.